ဓါတုနဲ့ အနုမြူလက်နက် အစီအစဉ် မရှိကြောင်း ကာချုပ် ပြောဆို
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့က ပြည်နယ်ခန်းမမှာ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေ အတွက် ကွန်ပျူတာတွေ လှူဒါန်းပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို တွေ့ရစဉ်
တပ်မတော်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ ဓါတုလက်နက်တွေ အသုံးပြုနေတယ် ဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း တပ်မတော်မှာ ရှိလည်း မရှိကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့က ပြည်နယ်ခန်းမမှာ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေအတွက် ကွန်ပျူတာတွေ လှူဒါန်းပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့အပေါ်မှာ စွပ်စွဲနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုမှ တိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်မှာ ဓါတု လက်နက်တွေ သုံးတယ်ဆိုတာလည်း လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး၊ ရှိလည်း မရှိပါဘူး၊ မကြာသေးခင်ကာလ ကျနော်ကို အနောက်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတစ်ယောက်က ကျနော့်ကိုလာပြီးတွေ့ပါတယ်၊ ကျနော့်ကို မေးပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ဆီမှာ ဓါတုဗေဒ အဆိပ်သင့်လက်နက်တွေရှိတယ်လို့ သုံးနေတယ်လို့ပြောတယ်၊ အဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေး ချင်သလဲ မေးတဲ့အခါမှာ ခင်ဗျားကြိုက်သလို စုံစမ်းလို့ရတယ် ဆိုတော့ ကြိုက်သလိုလုပ်ပါလို့ ခင်ဗျားသံသယ ရှိတဲ့နေရာ ကျနော်ကိုပြပါ၊ ကျနော်အကုန်လုံးပြဖို့ အဆင့်အသင့်ရှိတယ်၊ သို့သော်လည်းပဲ လျှို့ဝှက်အပ် တဲ့နေရာအတွက် ကျနော်တို့တွေက ပြလို့တော့မရဘူး၊ ကျန်တဲ့ဟာတွေ ခင်ဗျားတို့ကို အသိပေးမယ်လို့ ကျနော်ကပြောတယ်"
ဓါတုလက်နက် မပြန့်ပွားဖို့အတွက် တပ်မတော်အနေနဲ့ ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဆောင်ရွက်နေပြီး ဓါတုလက်နက် အသုံးပြုမှုမရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂကိုလည်း တရားဝင် ပြောကြားထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈ဝ ခုနှစ်လောက်က ဓါတုလက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့ သုသေတန ပြု လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်ခင်ကတည်းက အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနုမြူ လက်နက်တွေဝယ်ဖို့ တပ်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေဟာလည်း မှားနေကြောင်း တပ်မတော်အနေနဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း မရှိကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ အနုမြူ နည်းပညာဟာ လူသားတွေအကျိုး အတွက်သာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးသာ တပ်မတော်မှာရှိကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အစိုးရဌာနဝန်ထမ်း ၈ဝဝ ကျော်နဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး ကျောင်းသုံးကွန်ပျူတာတွေကို ကျပ်သိန်း ၁၇ဝဝ ကျော်ဖိုး လှူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ဆုတ်ခွာဖို့ တပ်မတော် သတိပေး
တပ်မတော် ထုတ်ပြန်ချက်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ကြိုဆို
တပ်မတော်က အပစ်ရပ်မယ့်ထုတ်ပြန်ချက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြိုဆို
တိုင်းပြည်ဆင်းရဲ နေတယ် တပ်ကလည်း လယ်သိမ်း ယာသိမ်း ပြီးတောင် စားနေရချိန်မှာ အာဏာတည်မြဲ ရေး အတွက် ယတြာချေဘို့ဝတ်စုံ အရောင်းပြောင်း ၀တ်ရတာလဲ ရှိသေးတယ်။ စစ်သားတွေ စိတ်ကူးယဉ် လို့ တိုင်းပြည်ဒုက္ခ ရောက်တာ။ တပ်မတော် တစ်ခုလုံးရဲ့ ဝတ်စုံ အသစ်ချုပ်ရတဲ့ စားရိတ် ဘယ်လောက် လေလွင့် သွားမယ် ဆိုတာ နည်းနည်းမှ ထည့်မျတွက်ဘူး။
Oct 07, 2015 01:49 AM
နေရပ်- ဇီး ကုန်း မြို့
I would like to believe what he says.
But my brain objects.
Oct 06, 2015 11:06 AM
တိုင်းပြည်ရှုပ်ထွေးတာ အဲဒါကြောင့်ပဲ။ ဒါ အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေး ပညာရေးဌာန တွေက လုပ်ရမဲ့ အလုပ်။ သူလှူ ချင်ရင် ပညာရေး ဌာန သွားလှူပေါ့။ တပ်က ရိက္ခာ မလုံလောက် လို့ ဆိုပြီး လယ်တွေ သိမ်း ယာတွေ သိမ်း လုပ်နေရင် အခုလို ဘာဖြစ်လို့လှူနေသေးလဲ။ အဲဒီ အစား လယ်သိမ်း ယာသိမ်းတွေ မလုပ်နဲ့ ပေါ့။ ပြောတော့ တပ်က နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းတယ် ဆိုပြီး သူ ကိုယ်တိုင်က မဲဆွယ်နေတဲ့ ပုံစံ မျိုး ဖြစ်နေတယ်။ သနားစရာတော့ကောင်းတယ် ကိုယ် ဘာလုပ်လို့လုပ်နေမှန်းမသိဘူး။
Oct 05, 2015 08:18 PM
ဖွတ်အစိမ်းရောင်အကောင် ကြီးကြီး အ မြီး ရှည် ရှည်
အနှစ် ၆ဝ ကျော် နှိုင်ငံရေးကိုံ ရှုပ်ထွေးအောင် အမျိုးမျိုး လုပ်နေပြီး တိုင်းပြည် ကို စုပေါင်း ဖျက်ဆီးခဲ့ တာ အားမ ရသေးဘူးလား
ဘယ် ဗေဒင် အကြားအမြင်၊ ဘိုးတော်ဘွားတော်တွေ ယတြာ ခြေခိုင်းပြန်တယ် မသိ။ အရောင်ပြောင်းရမယ်တဲ့လား။ သည်အရောင်ကြီးက လေးနက်မှုမရှိ၊ နဂိုကမှ လူတွေ အကြည်ညိုပျက်နေရတဲ့ အထဲ အရင်အရောင်ကမှ မြင်ရတာ တော်သေး။ လေပါတယ်။
Oct 05, 2015 03:27 PM